5 Email Isbeddellada Mobilka Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ka Fiirsatid | Martech Zone
Mid ka mid ah waxyaalaha inta badan aan qabanno waa inaan fiiro gaar ah u yeelano isbarbardhigga taraafikadayada iyo qiimayaasha furan ee isla muddadaas bishii la soo dhaafay ama isla xilliyadii la soo dhaafay. Hubinta qiyaastaada oo aad aragto sida wanaagsan ee aad wax u qabanayso waa muhiim - laakiin sidoo kale waa inaad la qabsataa sida macaamiishu isu beddelayaan. Mobilku waa mid ka mid ah meelaha ay tahay inaad fiiro gaar ah u yeelatid maadaama tirooyinku si weyn u kala duwan yihiin waqtiga.
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay moobiilku wuu koray si loo xakameeyo qayb muhiim ah oo ka mid ah muuqaalka emaylka. Furitaankiisu, wuxuu ka kooban yahay ku dhowaad 50% wadarta guud ee sanadka oo dhan, ka dhigista u sahlashada moobiilku daruuriga dhammaan safarayaasha. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo moobiilku uu kordhay muhiimaddiisa, desktop-ka iyo websaydhka ayaa wali ah qayb muhiim ah oo ka mid ah suuq-geynta emaylka. Si lagaaga caawiyo inaad hagaajiso barnaamijka emaylkaaga si aad ula xiriirto macaamiishaada, boggayaga cusub ee 'infographic' wuxuu muujinayaa shan isbeddellada moobiilka ee muhiimka ah ee aad u baahan tahay inaad ka feejignaato.
Ingraphicgraphic this, 5 Isbeddellada Wareegtada ee ka socda ReturnPath, waxaad ka heli doontaa xoogaa isbeddello xiiso leh oo ku saabsan habdhaqanka loogu isticmaalo mobilka:
In kabadan 50% dhammaan emayllada ayaa hadda ku furan aaladda moobaylka. Emailadaada malagu habeeyay daawashada moobiilka?
Qiimaha furan ee emaylku wuxuu ku socdaa isbeddel hoos u sii dhacaya markaan ku sii dhowaanno maalinta Kirismaska. Weli ma dirtay?
Isticmaalka kiniinka marka loo eego isticmaalka mobilada wax badan iskama bedelin sanadkii la soo dhaafay.
Kala qaybinta dhagaystayaashaada dal ahaan waxay sababi kartaa habdhaqan emayl aad u kala duwan oo udhaxeeya aaladaha iyo aaladaha.
Haddii aad ku jirtid warshad gaar ah, waxaad arki doontaa natiijooyin aad uga duwan kan iimaylka tilmaamayaasha.
Tags: Qiimaha furan emailka desktopboostada desktopemaylka gacantaemaylka mobilada sicirka furanisbeddellada emaylka moobiilkaboostada moobaylkamarketing mobileqiimaha furan mobileisbeddellada wareegawaddo soo noqoemaylka kiniinkakiniiniga e-maylku qiimayaasha furanwarqad kiniin ah
Da'da Dijital ayaa si deg deg ah wax walba u badaleysa